नेपाली नेता र व्यापारीले यौ'न प्या'स मेटाउन मगाउन थाले विदेशबाट युवती ! -
नेपाली नेता र व्यापारीले यौ’न प्या’स मेटाउन मगाउन थाले विदेशबाट युवती !
काठमाडौँ, ५ बैशाख । नेपाली समाज से’क्सका मामिलामा पछिल्लोपटक उदार बन्न थालेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ‘रे’ड लाइट’ एरिया छैन् । लुकीछिपी यौ’न व्यवसाय भने फस्टाइरहेको छ । नेपालको का’नुनले यौ’न व्यव’सायलाई अ’वै’ध मानेको छ । प्रहरीले रातबिरात छा’पा मारेर होटल, लजबाट यौ’नक’र्मीलाई प’क्रा’उ गर्ने गरेका खबरहरु बेलाबेला आउने गरेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय विभिन्न देशका महिला यौ’नक’र्मीलाई नेपालमा झिकाउने गरेको पाइएको छ । विकसित देशका महँगा यौ’नक’र्मी मगाएर यौ’न प्या’स मेटाउने उच्च तहका नेपाली नागरिक बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ ।
महँगो शूल्क तिरेर नेपालका पाँच तारे होटलमा विदेशी महिलासँग रा’त विता’उनेमा धनाढ्य व्यापारीदेखि नेतासम्म रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
त्यस्ता विदेशी यौ’नक’र्मी महिलासँग रा’त विता’उने गरेका एक उच्च तहका व्यक्तिले नै पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी महिला झिका’उने चलन बढ्दै गएको बताए ।
नाम नबताउने शर्तमा ती व्यक्तिले भने,“लाखौँ रुपैयाँ तिरेर विदेशी महिलासँग रा’त वि’ताउन चाहने नेपाली पुरुषको संख्या धेरै छ ।”
सरकारी निकायको उच्च पदाधिकारीदेखि उद्योगी तथा नेताहरु यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको उनले बताए ।
नेपालमा यसरी महिला यौ’नक’र्मी उपलब्ध गराउने अन्तराष्ट्रियस्तरको ठूलो गि’रोहले सहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको ती व्यक्तिले बताए ।
अहिले नेपाली यौ’नक’र्मी मात्रै नभएर विदेशी यौ’न’क’र्मी समेत नेपाल आउने गरेका छन् । यौ’न व्यवसाय फैलिनुलाई वि’कृति मान्ने कि नागरिकको चाहना ?